Shirkadda Kenyan Airways oo dib u dhigtay duulimaadyadii ay ka bilaabi laheyd Muqdisho - Halbeeg News
NAIROBI (HALBEEG)- Shirkadda diyaaradaha Kenyan Airways waxa ay marba marka kasii danbeysa dib u sii dhigeysaa duulimaadyadii ay ka bilaabi laheyd Muqdisho.
Maareeyaha shirkadda Kenyan Airways, Sebastian Mikosz ayaa baarlamaanka Kenya u sheegay in dib u dhaca duulimaadka diyaaradda Kenyan Airways ay ka bilaabi laheyd Muqdisho in uu la xiriiro arrimo siyaasadeed ayna keeni karto in uu saameyn ku yeesho ballaarinta duulimaadyada diyaaradda ee gobolka.
War Agaasime Mikosz uu soo saaray talaadadii ayuu ku sheegay in dib loo dhigay duulimaadkii Muqdisho ilaa ogeysiis danbe iyadoo sidoo kalena ay weli diyaaradda wajaheyso shuruudo badan oo ay tahay in ay fuliso ka hor inta aanay bilaabin duulimaadkan.
“Waxuu dib u dhac ku yimid duulimaadkii diyaaradda Kenyan Airways iyadoo ay dheertahay in ay jiraan shuruudo howleed ka hor inta aan la bilaabin duulimaadkan, dib ayaan idinkaga soo sheego doonaa wixii dheeraad ah” ayuu yiri Sebastian Mikosz.
Dib u dhacan ayaa yimid kadib markii diyaaradda Kenyan ay Airways ay saddex diyaaradood oo ka jira gobolka ay u diideen in ay u isticmaasho diyaaradaha Bombardier si ay u hirgeliso jadwalka duulimaadyada cusub.
Wadanka Jabuuti iyo Koonfurta Suudaan ayaa si isku mid ah u diiday in ay heshiis wada shaqeyn ah la galaan diyaaradda Kenyan Airways.
Diyaaradaha Bombardier ayaa ah kuwa loogu tala galay duulimaadyada gaaban maxaa yeelay qarash badan kuma baxo.
Shirkadda diyaaradaha ugu weyn Afrika Ethiopian Airlines ayaa ku soo biirtay shirkadaha kala ah Turkish, Air Arabia, Fly Dubai iyo Jabuuti si ay u fududato xiriirada ganacsi ee ay Soomaaliya la leedahay Bariga Dhexe iyo Yurub.
Sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in ay dib u howlgeliso diyaaraddii Qaranka ee Somali Airlines horraanta sanadka soo socda.
Kenya oo su'aalo weydiineysa Soomaali looga shakisan yahay afduub loo geystay gabar Talyaani ah